Latino mpifindramonina ao Etazonia: Niova ve ny toe-draharaha? · Global Voices teny Malagasy
Na manantaratasy na tsia, sarotra ny fiainana ho an'ireo Latinos any Etazonia
Voadika ny 19 Novambra 2021 3:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, srpski, українська, Dansk, Nederlands, Português, English
Ny Latinos no betsaka indrindra amin'ny vitsy an'isa any Etazonia. Tahaka ny mihatsara ny fiainan’izy ireo — ny fandinihana sy ny antontanisa no milaza izany. Saingy na dia mijotso aza ny tahan'ny fahantrana, dia mbola ny Latinos ihany no anisan'ny mahantra indrindra sy tsy dia nandia fianarana indrindra. Tamin'ny taona 2017, manodidina ny 65 isanjaton'ny olona tsy manana taratasy no Meksikana sy Amerikana Afovoany; ireo isa ireo dia mahafaoka ny zavatra niainan'ny olona efa ho fito tapitrisa, ary efa nipetraka tany Etazonia nandritra ny folo taona mahery ny ankamaroan'izy ireo.
Tena mafy ny fiainana ho an'ireo mpifindramonina tsy manana taratasy. Tsy mahazo ny zo fototra izy ireo rehefa tsy ampy taratasy. Tsy maintsy miaina miafina, ary amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia eo amin'izay tian'ny mpampiasa na ny tompon'ny tany midadasika anaovana azy. Matetika ireo olona ireo no mampiasa azy ireo tsy ara-dalàna sy ambany karama, ora maharitra sy mandreraka. Matetika kokoa ireo mpifindra monina ireo mitatitra ny faharatsian'ny fiainana.
Satria tsy Latino aho, ny fahalianako amin'ity lohahevitra ity dia nipoitra avy amin'ny fijerena ny toe-javatra tsy maintsy atrehin'ny maro amin'io vondrona vitsy an'isa io isan'andro. Tamin'ny taona 2017, nifindra tany Los Angeles aho ary nandany iray taona sy tapany tany. Nandritra io vanim-potoana io dia nifandray akaiky tamin'ny vondrom-piarahamonina Latino aho, nahazo namana avy ao anatiny, niresaka tamin'ny olona am-polony maro samihafa fiaviana, ary nandeha tsindraindray tao amin'ny fiangonana Latino.
Ny voambolana “Latino” dia voambolana iraisan'ireo olona mitono-tena ho Amerikana Latina. Midadasika ny famaritana ary mahasahana fiainan'olona maro amin'ny sata ara-tsosialy sy ara-toekarena, fanabeazana, foko ary lahy sy vavy. Amin'ity tantara ity dia niresaka tamin'ireo mpifindra monina taranaka voalohany sy faharoa avy any Meksika sy Amerika Afovoany aho, izay miasa amin'ny fanorenana, indostrian'ny asa fikarakarana ary orinasa any Etazonia.
Lasa mpiasan’ny fanorenana i Oscar M., 43 taona, raha vao tonga tany Etazonia avy any Meksika izy. Rehefa niresaka taminy aho, dia nipetraka tao amin’ilay toeram-panorenana tao Los Angeles mihitsy izy, satria tsy afaka nanofa trano. Nilaza i Oscar fa nanantena ny mpampiasa azy hifindra mivantana any amin'ny toeram-piasana izy mba ho azo ampiasaina bebe kokoa. Ny niasa tao no fomba haingana indrindra hivelomana ho an'izay tsy nanana afa-tsy ny tanany. Nandritra ny taona maro dia nahita asa tamin'ny alàlan'ny toho-tsofina teo amin'ny fiaraha-monina izy, niaraka tamin'ny soso-kevitra avy amin'ny namana sy mpiara-miasa.
Nijaikojaiko avy amin'ny trano iray mankany amin'ny iray hafa izy, nanantena fa tsy hahita azy ny (Mpampihatra Lalàna) Fifindramonina sy Fadintseranana na Immigration and Customs Enforcement (ICE). Ny fiarany no (akany fialofany), vatam-piainany amin'ny takona rehefa nivezivezy nanavatsava ny tanàna izy. Fa ampy hampidi-doza amin'ny fitoerany (ao an-tanàna) ny tapakila azo noho ny tsy firehetan'ny jiro aoriana iray.
Ankehitriny, mponina raikitra i Oscar. Nolazainy tamiko fa tsy niova firy ny toe-javatra iainany, na izany aza: tsy natahotra ny ho voasakan'ny polisy intsony izy. Koa satria Meksikana izy, dia nilaza fa ny olona iasany dia manantena azy “hikatsaka ny asa tsy tian'ny olona.”
Manantena azy hiasa ora maharitra kokoa sy “hibata entana mavesatra” ry zareo. Te hahita asa mahafa-po kokoa izy, saingy tsy mora izany rehefa manana faktiora tokony haloanao sy fianakaviana hofahanana ianao. “Ity no tanin'ny hirika, marina izany. Saingy rehefa manahy ny hatory eny an-dalambe ianao dia manohy manao izay efa nataonao fotsiny. Ary manantena ianao fa ho tsara kokoa ny ampitso.”
Saripikan'i Thomas Hawk/Flickr (CC BY-NC 2.0)
Ireo solontena sy mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny fiangonana Latino any Los Angeles no milaza amiko ny amin'ireo olona “tsy manana anarana” eo imason'ny fiarahamonina, ary miady mafy mba ho velona amin'ny faran'ny volana, mangataka sakafo sy akanjo. Tantarain-dry zareo ny amin’ny olona miasa tafahoatra, lanin’ny ezaka ara-batana tsy maintsy ataony isan’andro amin’ny fiasana eny an-tsaha, asa an-trano, any amin'ny indostrian’ny fanorenana, na eny amin'ny orinasa. Indraindray koa ireo mpiasa any Amerika Latina tratran'ny voina amperinasa, ka mahatonga azy ireo ho kilemaina, tsy mahazo onitra noho ny ratrany, ary tsy mahazo fitsaboana.
Na ny Latinos manana fahazoan-dàlana hiasa aza mitaraina amin'ny toe-javatra tahaka izany, fa somary malefaka kokoa. Omena asa mampidi-doza sy ambany fidiram-bola sady miasa ora maharitra izy ireo. Asa ahafahana mahazo vola araka ny tokony ho izy rehefa tena be ny ora niasana, toy ny any amin'ny toeram-pisakafoana tsakitsaky, call centers, fanorenana sy orinasa. Misy ireo mpifindramonina manana mari-pahaizana izay tsy maintsy mandany ny androm-piainany amin'ny maha-mpitahiry entana. Matetika dia tsy miankina amin'ny fahaiza-manaony na ny fahazaran-draharahany ny kalitaon'ny tombontsoa azony (ohatra, ny fiantohana ara-pahasalamana), fa miankina amin'ny politikan'ny orinasa iasàny ihany, araka ny nambaran'ny maro tamiko. Miankina tanteraka amin’ny fanapahan-kevitry ny mpampiasa azy ny fiainan’izy ireo.
Efa mponina raikitra ela be talohan'i Oscar i María Rosa S., 58 taona. Raha vao nahazo ny fahazoan-dàlana izy dia nanomboka niasa tao amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray ho mpanadio amin'ny alina. Milaza izy fa mba manana fiainana “saika azo ihoriranana”, raha heverina fa rehetra azony natao tahiry, nalefany any amin'ny havany any El Salvador, mba hanampy azy ireo hahavelona.
Efa 13 taona izao no tsy niverina tany Salvadaoro, tany niaviany, i María Rosa, ary noho izany dia 13 taona no tsy nahitany ireo zananilahy. Efa tsy ho azo velively, hoy izy, ny taratasy ahafahan-dry zareo mankany Etazonia. Lafo ny tapakilan’ny fiaramanidina, ka aleony mitsitsy.
Maka fotoana lasa miraikitra maharitra ny fampanantenana fanatsarana ny fiaraha-monina. Ary mbola mijanona ho iray amin'ireo fomba mahomby indrindra ahafahana mahatsapa, etsy andaniny ny fahasahiranana mianjady amin'izy ireo, sy etsy ankilany ny hoe aiza ny tokony handraisana fepetra ihany koa ny fikirizana hanome feo ho an'ireo mpikambana voahilikilika ao amin'ity vondrom-piarahamonina goavana ity.